SingForYou.net - aungtun1's Channel
aungtun1 's Channel
Contest Winner Yin Thoe Toe Way Sel Par Khaing
End date: 03/09/2009
Last Login: 05-02-2016 09:37
Channel Views: 47,623
SFY မောင်နှမများအားလုံး သီချင်းများကို သီဆိုရင်း နားဆင်ရင်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်များစွာပိုင်ဆိုင်ပါစေ .....
Enjoy Singing, Brothers and Sisters..........With Best Wishes.......AT....:)
Hobbies Music, Football, Travelling,
enaung on Oct 12, 2013
You got cool voice, man. BTW, when I first heard Sai Leik's song it reminded me of your singing style. Keep on singing, bro.
ddnann on Sep 24, 2013
recording မှာ comment ပေးလို့မရတော့ profile ကို လာလည်သွားတယ်..... အသံမိုက်တယ် ....
saimoethiha on May 19, 2013
atan ka mike tel
အကိုအောင်ထွန်းရေ..အားကျလိုက်တာ အကိုဆိုတာအရမ်းကိုနားထောင်လို့ကောင်းတယ် နေ့တိုင်းလာလည်ပြီးနေ့တိုင်းအားပေးနေပါတယ်အကို့ရဲ့သီချင်းတွေကို အားရင်လာဆိုပါဦးနော် စောင့်မျှော်အားပေးနေပါတယ်
Hnin-H-H on Mar 16, 2012
အစ်ကိုအောင်ထွန်းရေ..သီချင်းတွေကိုအားပေးရင်းလာလည်သွားပါတယ်နော်....အစ်ကိုရဲ့ အဆိုနဲ့ အသံကိုအရမ်းလေးစားပြီးအားကျတယ်အစ်ကိုရေ...SFYထဲမှာအစ်ကိုတို့ လိုအဆိုတော်တဲ့သူတွေရှိနေတော့ပိုစည်ကားနေတာပေါ့သီချင်းအသစ်တွေလဲစောင့်ပြီးအားပေးနေမယ်နော်...
Kate29 on Feb 5, 2012
You are very talented, mg lay ... Keep it up!
paohlay on Jan 22, 2012
လေးစားအားကျရတဲ့ ဂွတ်ရှယ်အသံရှင် အဆိုရှင် ကိုအောင်ထွန်းဆီကို လာလည်ပြီး သီချင်းတွေကိုနားဆင် သွားပါတယ် အစ်ကိုရေ အသံကောင်းပေမယ့် မာနမကြီးပဲ ကျနော့လို ခပ်ချာချာဝါသနာရှင်တွေကို အမြဲလာရောက်အားပေးတတ်တဲ့ အစ်ကို့ ကိုလဲ အမြဲလေးဆားလျက်ပါ
rappinggirl on Jan 7, 2012
အခုလောက်မေးချင်လို့........ ဒီဆိုက်က သူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး......... စနိုး ဆိုချင်တဲ့သချင်းလေး ဒီမှာမရှိလို့ပါ...... ကူညီပါဦးရှင့်......
santimaung on Dec 31, 2011
lar lel twar par the shint
phoethaw10 on Dec 29, 2011
အကို အောင်ထွန်းရေ .. လာလည်သွားပါတယ်ဗျာ ... လည်ပြီးသွားပြီ မှတ်လို့ .. မလည်ရသေးတော့ အခုတစ်ခါထဲ လာလည်ရင်း သီချင်းတွေ နားဆင်သွားပါတယ် .. အသံကတော့ ဘယ်သီချင်းဆိုဆို အရမ်းကောင်းပါတယ် သီချင်းအေးလေ ပိုပြီးလိုက်ဖက်လေပါပဲ ကိုအောင်ထွန်းရေ ... ဆက်ဆိုပါဦး ... အားပေးနေပါ့မယ် ...
Maung La Pyae Won
Views: 3003 Duration :06:50
Views: 2150 Duration :03:31
"Sing For You" mha Brothers and Sisters myaratwet Duet song ta poke try kyit hter tar par....Thank you so much to Sister Susan. And also thank you for listening All Brothers and Sisters........ <<<<<...
Views: 2064 Duration :04:02
Views: 1491 Duration :05:47
Views: 1326 Duration :03:46
Lwan Yel Ma Pyay
Bro Ko Seven & Sis Susan dot nat D song lay ko try nay tar kyar par p,,, timing ka ma mhan lot, ma tin phit tar par,, Timing mhan thwar tot Volume ka ma mhan buu :D.......i totally apologise for that, friends ...........thank...
Views: 1310 Duration :04:04
Tain Lwar Moe Moe Lwin
Views: 1248 Duration :04:46
Views: 1194 Duration :04:42
Ayin Ka Zat Lann
Views: 1156 Duration :04:18
Views: 1043 Duration :03:33
Edi Lout Taung Chit Ya Thi
Views: 984 Duration :03:16
Thin Khan Sar
Ko Ywine's song lay tay htel ka,akyite sone song lay ta poke par,,,.......
Views: 963 Duration :04:35
View All Recordings of aungtun1